अभिनेत्री प्रियंका कार्की आमा बनिन् । जन्माइन छोरी बधाई दिनेको ओइरो हेर्नुहोस् भिडियो सहित – Khabar28media
अभिनेत्री प्रियंका कार्की आमा बनिन् जन्माइन छोरि बधाई दिनेको ओइरो हेर्नुहोस् भिडियो सहित
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको आमा बन्ने दिन नजिकिदैँ छ। उनी गर्भवती भएको ८ महिना भयो।गर्भावस्थालाई उत्सवको रुपमा मनाइरहेकी छिन् उनी। आफ्नो आमा बन्ने उत्साह र खुशीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् साट्ने बताउँछिन्।
सकारात्मक प्रतिक्रिया आत्मसात् गर्ने र पचाउन सक्नुपर्ने बताउँछिन् प्रियंका। भन्छिन्, ‘मलाई जे गर्दा खुसी मिल्छ, म त्यही गर्छु। सबैलाई मेरो जीवनशैली मनपर्छ भन्ने छैन। कसैलाई मेरो जीवनशैली मन पर्दैन भने पनि म केही गर्न सक्दिनँ। किनकि सबैको आफ्नो व्यक्तिगत विचार हुन्छ।’
सामाजिक सञ्जालमा आउने नराम्रा कमेन्टलाई वेवास्ता गर्दै राम्रा प्रतिक्रियामा केन्द्रित हुन्छिन् उनी। ‘दश जनाले गाली गर्छन्। हजार जनाले फोटो सेयर गरेर यसरी नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन्। दोस्रो समूहलाई फोकस गर्छु म। घृ-णामा मात्रै फोकस हुन म सक्दिनँ।‘
नेपालमा अझै पनि ‘बेबी बम्प’, ‘बेबी सावर’ जस्ता विषयहरूलाई सामान्य रुपमा नलिने जमात ठूलो भएको प्रियंकाको फोटोहरूमा आएका प्रतिक्रियाले प्रष्ट्यायो।
जसको प्रमुख कारण अशिक्षा रहेको प्रियंका बताउँछिन्। पहिलेको तुलनामा केही परिवर्तन आफूले पनि महसुस गरेको तर अझै संरचनागत् सुधार आवश्यक रहेको उनको विचार हो।
‘म आफ्नो अडान लिन्छु। आफ्नो ठाउँमा उभिन्छु। सबैले त्यसो गर्नु चाहिँ पर्छ। अनि मात्रै हामीले पितृसत्तात्मक सोच र महिलाविरोधी सामाजिक चेतनालाई चुनौति दिन सक्छौँ ।
कलाकार हुनुको नाताले आफ्ना गतिविधिमाथि धेरैको नजर पर्नु र त्यसमा टिकाटिप्पणी हुनु सामान्य लाग्छ उनलाई। आउने हरेक प्रतिक्रिया र प्रश्नमा जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनन् उनी ।
‘म आफ्नो अडान लिन्छु। आफ्नो ठाउँमा उभिन्छु। सबैले त्यसो गर्नु चाहिँ पर्छ। अनि मात्रै हामीले पितृसत्तात्मक सोच र महिलाविरोधी सामाजिक चेतनालाई चुनौति दिन सक्छौँ । कलाकार हुनुको नाताले आफ्ना गतिविधिमाथि धेरैको नजर पर्नु र त्यसमा टिकाटिप्पणी हुनु सामान्य लाग्छ उनलाई। आउने हरेक प्रतिक्रिया र प्रश्नमा जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनन् उनी ।
जरुरी ठानिनन् र त गर्भावस्थामै पनि व्यवसायिक कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्। ती काममा ध्यान दिनेहरूले दिए। आएका प्रतिक्रियालाई आत्मसात् गरिन्। आमा भइसकेपछि आफूमा उर्जा थपिने उनको विश्वास छ।
‘केही समयपछिको विश्रामपछि म काममा फर्कन्छु। त्यतिबेला मेरो काममाथि हुने टिप्पणी र आलोचनात्मक प्रतिक्रियाहरूलाई आत्मसात गर्नेछु। हाललाई भने म आमाको भूमिका निर्वाह गर्दैछु। प्रियंकाले सुनाइन् ।
Previous Article ६५ तोलाका सुनमान्छे भन्छन्, बिजय शाहीलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ कार्बाही हुन्छ ! (भिडियो हेर्नुहोला)
Next Article युके लाहुरेको सपना बोकेर दौडनेलाई यो कुरा थाहा छ? जानि राख्नुहोस्